About Us - Xuzhou Linearnuo Import & Export Trading Co., Ltd.
Xuzhou Linearnuo Inkampani kuyinto glassware nomkhiqizi kanye nokuhweba inkampani okhokhelwayo. Inkampani yethu wazibonela ekukhiqizeni imikhiqizo ingilazi, u-98% imikhiqizo yethu zithunyelwe phesheya kwezilwandle, Ngaphezu kwalokho, sinawo ucwaningo nentuthuko umkhiqizo iqembu lochwepheshe lapho yakhiwa onjiniyela senior kanye nochwepheshe embonini ingilazi, futhi singakubonisa ukuklama amabhodlela ngezifiso ngokuhambisana nezidingo amakhasimende '.
Ukwaneliseka Amakhasimende 'amandla ethu kusengaphambili, ophikelelayo inkonzo ifilosofi yethu. Sizonikeza ezahlukene amakhasimende ngemisebenzi emihle njengoba esikhathini esidlule. Sicela ungangabazi ukuxhumana nathi mayelana nezidingo zakho futhi ake ukukhonza kwakho.
Sine 8 zokukhiqiza imigqa, 10 yokubonisana, 20 imigqa ukuhlangana, okuyinto ekuqinisekiseni ikhono lethu lokuveza glass amabhodlela kumakhasimende sihluke emhlabeni wonke. Ukuze amakhasimende 'imfuneko okwengeziwe, sinikeza ukucutshungulwa ezijulile amabhodlela. izinqubo zethu ezijulile ikakhulu zihlanganisa: Ilebula Ukuphrinta, Usilika Ukuphrinta, Zezıhlabane Wokushaya, frosting nokunye on.We kungaba akhiqize ngisho ukolweni omncane ukuze banelise izidingo amakhasimende ezahlukene.
Inkampani yethu uyazicabangela ukwethembeka, ikhwalithi kanye inkonzo njengoba Amatshwayo brand. Ngezenzo ubambisana amaklayenti angaphandle kanye ezifuywayo, siye ukumisa i-emakethe olubanzi network.On Kulesi senzakalo, thina ngobuqotho ukwamukela kwakho ibe yizimiso lwethu ukuvakashelwa, ukuhlolwa nokubambisana!
Car Perfume Amabhodlela , engenalutho Nail Bottle Polish , Amber Essential Oil Bottle , Nail Bottle Polish , Bamboo Muhle Cream Jar, Nail Polish Glass Bottle ,